Semalt: Google लाई कसरी थाहा हुन्छ कहिले (र किन) तपाईंको वेबसाइट क्रलिंग रोक्नको लागि?
गुगल मकड़ीहरू एसईओ अभियान जत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब वेबसाइट मार्केटिंग गर्दा। तिनीहरूले वेबसाइटहरू र यो पत्ता लगाउन सक्नुहुने सबै पृष्ठहरूबाट सामग्री अनुक्रमणिका सामग्री क्रल गर्दछन्। यसले साइटमा अपडेट भएका पृष्ठहरूमा पुन: अनुक्रमणिका पनि गर्छ। यो नियमित आधारमा केहि कारकहरूमा आधारित गर्दछ। तिनीहरू सामेल छन्, तर सीमित छैन, PageRank, क्रॉलिंग अवरोध, र लिंक पृष्ठमा फेला पार्नुभयो। Google स्पाइडरहरूले साइट क्रल गर्ने संख्या यस कारकहरू मध्ये एक वा बढीमा निर्भर गर्दछ।
एक वेबसाइट आगन्तुकहरू साथ साथै गुगल क्रल मकड़ियों द्वारा सजीलो नेभिग हुनुपर्दछ। यो कारण यो हो कि क्रल-मैत्री वेबसाइट भएको कसैको एसईओ अभियानमा थप लाभ हो। अन्यथा, गुगलले सामग्रीमा पहुँच गर्न असमर्थ हुनेछ, परिणामस्वरूप खोजी ईन्जिन रैंकिंग पृष्ठमा साइटको रैंकिंग कम गर्‍यो।
Semalt का ग्राहक सफलता प्रबन्धक रस बार्बर परिभाषित गर्दछ कि दुई सब भन्दा महत्वपूर्ण अनुक्रमणिका कारकहरू जुन Google ले तपाईंको साइटलाई क्रिलि slow या ढिलो रोक्नको निर्णयलाई प्रभाव पार्न मा भर पर्दछ जडान समय र HTTP स्थिति कोड हो। अरूले अस्वीकार आदेश, "कुनै पछ्याउँदैन" ट्यागहरू, र रोबोटहरू। txt समावेश गर्दछ।
समय र HTTP स्थिति कोडहरू जडान गर्नुहोस्
कनेक्ट समय कारक गुगल क्रल बोट साइट सर्वर र वेब पृष्ठहरू पुग्न लिन लाग्ने समयको मात्रासँग सम्बन्धित छ। गुगलले गतिलाई अत्यन्तै मूल्यवान बनाउँछ किनकि यो राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभवको अत्यधिक सूचक हो। यदि वेबपेज गति अप्टिमाइज गरिएको छैन भने, साइट पछाडि खराब नराम्रो हुनेछ। गुगल स्पाइडरहरूले वेबसाइटमा पुग्न प्रयास गर्नेछ, र यदि जडान सिर्जना गर्न लिइएको समय लामो छ भने, तिनीहरू पछाडि फर्कन्छन् र यसलाई कम पटक क्रल गर्दछन्। यसबाहेक, यदि गुगलले हालको गतिको साथ वेबसाईटलाई अनुक्रमणिकामा धकेल्छ भने यसले प्रयोगकर्ताको अनुभवलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्छ किनकि यसले यसको सर्वरलाई सुस्त बनाउँदछ।
दोस्रो अनुक्रमणिका कारक HTTP स्थिति कोडहरू हुन् जुन सर्भरले साइट क्रल गर्नका लागि अनुरोधलाई कसरी राम्रो गर्ने भन्ने प्रमाणित गर्छ। यदि स्थिति कोडहरू xxxx० दायरा भित्र छन् भने Google ले आफैंमा लिन्छ यसलाई रोक्न वा ढिलाइ गर्न जुन तिनीहरू हालको साइट क्रल गर्दछ। 5xx दायरा भित्र केहि पनि सर्भरको साथ सम्भावित मुद्दाहरूको सूचक हो र अनुरोधलाई जवाफ दिने समस्याग्रस्त हुन सक्छ। थप समस्या निम्त्याउने जोखिमको कारणले, गुगल बट्स एकपट्टि सर्नेछ र सर्वर अधिक पहुंचयोग्य हुँदा अनुक्रमणिका कार्य गर्दछ।
गुगलले कहिले साइट क्रलिंग पुन: सुरू गर्दछ?
गुगलले उत्तम अनुभवको साथ प्रयोगकर्ताहरू प्रदान गर्नमा विश्वास गर्दछ र साइटहरूलाई क्रमबद्ध गर्दछ जुन उनीहरूको एसईओ तत्त्वहरूलाई यी उद्देश्यहरू उच्च पार्दछ। जहाँसम्म, यदि वेबसाइटले माथि उल्लेखित समस्याहरू प्रदर्शन गर्दछ भने, यसले यसको गुगलबोटलाई पछि यसलाई क्रल गर्न को लागी आदेश दिनेछ। यदि समस्याहरू रहिरह्यो भने मालिकले ठूलो सामग्री गुमाउनेछ गुगलले यसको सामग्रीहरू मार्फत जान र यसलाई खोज परिणामहरूमा राम्रो हकदार दर्जा प्रदान गर्दछ। यी समस्याहरूको साथसाथै, स्प्यामको कुनै पनि चिन्हले साइटलाई खोजी परिणामहरूमा देखा पर्न अवरुद्ध गर्नेछ।
गुगलले प्रयोग गर्ने सबै अन्य एल्गोरिदमहरू जस्तै, यसको माकुरा पनि स्वचालित हुन्छन्। तिनीहरू पत्ता लगाउन, क्रल गर्न, र अनुक्रमणिका सामग्री केहि मापदण्डहरूमा आधारित विकसित हुन्छन्। यदि साइट केहि उत्तम अभ्यासहरू अनुरूप छैन भने, अनुक्रमणिका हुने छैन। त्यहाँ अन्य धेरै कारकहरू सामेल छन्, तर जहिले पनि तपाईंको साइटको कनेक्ट समय र HTTP स्थिति कोडमा ध्यान दिएर ध्यान दिनुहोस्।